Abu Dhabi Airport sy Abu Dhabi Ports dia miresaka krizy sy filaminana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Abu Dhabi Airport sy Abu Dhabi Ports dia miresaka krizy sy filaminana
Ekipa iray avy any Abu Dhabi Ports no nitsidika ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi hijerena ny fomba fanao tsara indrindra ary hizara fahalalana sy traikefa. Ny fihaonana dia vokatry ny ezaka mitohy ataon'ny orinasa roa tonta hanatsarana ny asany tsirairay avy ary hiantohana ny fitohizan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy mpiara-miasa aminy.
Ny ekipa avy any Abu Dhabi Ports dia nihaona tamin'ny ekipan'ny fitohizan'ny raharaham-barotra sy fitantanana risika an'i Abu Dhabi mba hiresaka lohahevitra manan-danja ao anatin'izany ny toeram-pitsaboana fitantanana krizy, ny fizotran'ny fampandrosoana tanjona kendrena amin'ny fitohizan'ny orinasa ary ny fizarana teti-bola.
Ny roa tonta dia niresaka ny fomba fiasa mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny tatitra momba ny fiantraikan'ny asa aman-draharaha, ny drafitra valin'ny vonjy taitra sy ny krizy, ny fomba fitantanana ny mpamatsy sy ny mpifanaraka mitsikera, ny fifanarahana fifanampiana miaraka amin'ireo orinasan-kazo fanampiny ary ny fitazonana ny fisoratam-bokin'ny orinasa ateraky ny risika.
Bryan Thompson, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Abu Dhabi Airport, dia nilaza hoe: "Ankafizinay ny fotoana hizarana fomba fanao tsara indrindra amin'ireo mpiara-miombon antoka sy mpiray antoka aminay, ary ny fitsidihan'i Abu Dhabi Ports dia mifanaraka amin'ny iraka ataontsika ho fikambanana mahomby izay mahatakatra ny mpandray anjara sy manolotra serivisy seranam-piaramanidina manerantany. ”
"Manantena ny hihaona amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka hafa izahay rehefa miezaka manatsara hatrany ny asanay, ny serivisy ary ny fotodrafitrasa ary lasa vondrona seranam-piaramanidina lehibe manerantany," hoy i Thompson.
Tamin'ny fanaraha-maso vao haingana nataon'ny Office of Continuity Business an'ny Executive Council sy ny National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA), Abu Dhabi Airports dia nahazo 90%, naneho ny fanoloran-tenany ho ambony indrindra amin'ny sehatra rehetra.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia manana fenitra henjana indrindra eto an-tany ary ny Abu Dhabi Airport dia nahomby tamin'ny fampiharana ny fomba fiasa mahomby, paikady, politika ary fomba fiasa, ary koa ny fitantanana matanjaka sy ny rafitra fanaraha-maso mahomby izay nanome ny orinasa laza tsara.
Abu Dhabi Airport dia manolo-tena hizara ny traikefany amin'ny fampiharana sy fitazonana ireo fenitra ireo amin'ireo tompon'andraikitra nasionaly sy fikambanana hafa, ary ny fitsidihan'i Abu Dhabi Ports dia singa iray lehibe amin'ny ezaka ataony hanohanana ny tetezamita UAE ho amin'ny toekarena mifototra amin'ny fahalalana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa mpandray anjara eo an-toerana, mitondra fahombiazana amin'ny asa aman-draharaha, ary mametraka fari-pahaizana vaovao momba ny hatsarana.